Wednesday October 01, 2008 - 14:12:13 in Maqaallo by Xarunta Dhexe
Ciid wanaagsan walaayaal, samaan ku ciida dhamaan soomaalida saafiga aheey. Waxaan wada ognahay in dowladii dunida laga aqoonsanaa ee Soomaaliya la riday bishii janaayo 27dii 1991. Waxaana dalka ka dhacay cagabarar oo sababay QABIIL, waxaa waddooyin
Ciid wanaagsan walaayaal, samaan ku ciida dhamaan soomaalida saafiga aheey. Waxaan wada ognahay in dowladii dunida laga aqoonsanaa ee Soomaaliya la riday bishii janaayo 27dii 1991. Waxaana dalka ka dhacay cagabarar oo sababay QABIIL, waxaa waddooyin kuwii hore ka sii xun kana xanuun badan loo adeegsaday magaca QABIIL.
Waxaa ka dhacay welina ka dhacaayo oo ka socdo maantay soomaaliya ma aheeyn wax horay taariiqdu u qortay, ama xataa sheeko xariiro ahaan looga maqlay. Waxaa is dilaayay labada wiil oo halka hooyo wada dhashay, ayagoo magaca QABIIL isku dilaa, ileen isku aabe maahane! waxaa is jaajuusay labada isqaba, ileen isku Qabiil maahane! Waxaa is israadsanaa wiil iyo abtigiis ileen isku QABIIL MAAHANE!
Waxaa kala dhuuntay oo kala cabsanaa labadii saaxiib ee nafta qaybsan jiray ileen isku QABIIL maahane! Meel kasta qof soomaali ah ayaa ku dayacan, wax kale uma dayacna, umana il darna walaalkaaga soomaaliga ah ee waa QABIILKA qalbigaaga iyo aqligaaga gubay, oo ka soo reebay jirka socdo oo aan xisaabtamin, masuulkane aheeyn.
Waxaan u soo tahriibnay Yurub iyo Mareykan, waxaan noogala daba keenay QABIIL, oo qofwalba soomaali ah waxuu bixiyaa lacag oo kaga difaacaa 'dadkiisa iyo dhulkiisa' QAABIIL kale, waxuuna raali ka yahay, oo ku qoslaa in la dabargooyna inta kale. Waxaa dalkeenii gumeysi loo gelshay sababta QABIIL, oo maantay Itoobiyaan iwm oo ah dal aan isku dad, dhaqan iyo diin midna aheeyn, ahna cadawga koowaad oo aan leenahay u qabsadeen dalkeena sababta QABIILKA madoobeeyay muraayada qalbiga shaqsiga soomaaliga ah, kaas oo u diiday inuu dareemo dhibka lagu haayo dadkiisa rayadka ah ee la xasuuqaa habeen iyo maalin.
Waxaa suaal ah dhibkaan waa dhacaye sidee looga bixi karaa? Balsa waxaan umaleeyneeynaa inuusan jirin qof soomali ah oo suaashaan weli qiimaheeda fahmay, ama iskaga jawaabay inta is weeydiiyay. Hada hadii aan nahay dhalinyarta iskugu tagtay magaca Dabargooynta Qabyaalada iyo Horumarinta Da’ayarta soomaliyeed waxaan aaminsanahay in waxyaabaha soo socdo na caawin karaan hadii aan helno, kadibna aan qaadi karno tilaabo weeyn oo dunida soomaaliyeed wax ka bedesho insha Allaah:
1. wadani dhab ah. ( micnaheena daacad u ah dalkiisa, dadkiisa, diintiisa iyo jiritanka calankiisa. Qabin cudurka QABIIL, kana madax banaan QABYAALAD)
2. wadani leh aqoon aduun iyo mid aaqiro oo aan hagranin waxba.
3. Maal aan loo bixin dano shaqsi ah, ee loo baxsho soomaali weeynta shanta ah darteed.
4. ficilka wanaagsan oo la xoojiyo, kan xun oo la suuliyo.
5. siyaasi ka madax banana feker ajnabi, taageero, siyasad ahaan iyo dhaqaale ahaanba aan wax xariir ah la laheeyn dowlad ama shaqsiyaad ajnabi ah.
6. awood qaybsi cadaalad ah oo aan ku dhisneen reer hebel iyo tiro badi.
7. Bulshu isku duuban, kana awood badan maamulka sare ee dowliga ah, ayagoo adeegsanaa golaha barlaamanka wadaniga ah.
8. bulshada oo dhamaan aqriska iyo qoraalka taqaano, micnaha waxbarata si ay iskaga celiso halista ku soo wajahan. Insha alaah
maalinka intaan la helo, ama qayb ka mid ah la helo waa la guuleeysanaa. Ee adigana soomaaliyahow dagaalka nala gal, kagana dhig qalbigaaga mid nadiif u ah qofkasta oo kugu dhiig ah (Soomaali ah). Waxeey warqadaan si wada jir ah inkaga timid ururka dhalinyarta soomaaliyeed ee DQHDSOM.
Waxaana idin leenahay: !' Qabiil waa Qurun, waa qaran la'aan, waa qasaaro iyo qax, ee soomaaliyeey fahma qiimaha ay noo leedahay XORIYADA DALKEENA, NABADA IYO HORUMARKA WAAN U WADA OONAY. Soomaaliya iyo soomaali ha Noolaadaan waligood ayagoo XOR AH oo aan qabiil iyo gumeyste midna U TALININ KANA AMAR QAADANIN insha Allaah! AAMIIN' Mahadsanidiin.
Soomaali dhamaan CIID WANAAGSAN baan idin leenahay, ciidaan ciideeda kale alaha NABAD IYO XORIYAD BUUXDU NAGU GAARSIIYO INSHA ALAAH. Kala soo xariirka ururka DQHDSOM: hd_ww@hotmail.com. Ururkaan dhalinyarta iyo wadaniyiinta soomaaliyeed lagaama lahan ee waxaa lagaaga soo horeeyay!!
KA: ururka DABARGOOYNTA QABYAALADA IYO HORUMARINTA DA'AYARTA SOOMAALIYEED ( DQHDSOM)
07/07/2015 - 00:13:46
Dowladda Somalia waxey ka digeysaa shirkadaha sharci darada u jooga Somalia‏
07/01/2015 - 19:20:38
Dhalinta Soomaaliyeedeey Qabyaaladi Qiil ma leh!! (Faallo)
24/12/2014 - 15:36:21
02/07/2014 - 16:11:17
(Video), Wasiirka Arimaha Dibada: Dr Beyle, "Soomaalida waxey noqon doontaa sida Kurdiska". Wareysi Qiiro iyo Wadaniyad wata
05/06/2014 - 12:51:16
Muuqaal Xaqiiqo kahadal ah: Madaxweyne Xassan Sheikh Vs Xildhibaannda & Qabyaaladii oo lasiyaasadeeyay (Video)
15/05/2014 - 01:01:33
*Madaxweynaha Soomaaliya " Mashaariicda Dib u dhiska waxey saldhig u yihiin horumarka Dalka." (SAWIRO)
29/04/2014 - 22:04:19